Guddoomiye”Cismaan Barre”Shacabka Hir-Shabeelle badbaado ayay rabaan” - Awdinle Online
Guddoomiye”Cismaan Barre”Shacabka Hir-Shabeelle badbaado ayay rabaan”
Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowlad goboleedka Hir-Shabeelle ayaa ka hadley arrimo ay kamid yihiin Cudurka Coronavirus iyo Go’aankii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqdey ee ahaa in la xiro xaduudaha dalka.
Sheekh Cismaan Barre waxaa uu sheegay in dhamaan xaduudaha Gobolka Hiiraan uu la wadaago Gobolka Hiiraan uu yahay mid iska furan oo uu Maalin walba jaadka si caadi ah uu uga soo galo,isaga oo sheegay in Hir-Shabeelle u baahan tahay badbaado.
“Runtii xaduudaha Hir-Shabeelle uu la leeyahay maamul goboleedyada waa uu iska furan yahay cid ilaaliso majirto jaadka waa uu iska soo galaa,dowladda waxaan ugu baaqayaa inay arrintaasi waxka qabato oo Hir-Shabeelle ay badbaadiso ayuu yiri”Guddoomiye Cismaan Barre.
Hadalka Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowlad goboleedka Hir-Shabeelle ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan si caadi ah jaadka loo geeyso,sidoo kale Guddoomiyaha Cusub ee weli aan xilka la wareegin ee Cali Jeyte Cismaan uu sheegay in uu xiri doono dhamaan Xaduudaha Gobolka Hiiraan.
Previous articlePuntland oo sheegtay in aysan aqbali doonin dib u dhaca doorashada in marmarsiiyo looga dhigto Coronavirus
Next articleWasiir ka tirsanaa Maamulka Hirshabeelle oo u geeriyooday Coronavirus